Astaamaha ugu muhiimsan waa porosity sare iyo qulqulka aadka u fiican, luminta cadaadiska yar iyo qulqulka weyn; Awoodda bulaacadaha waaweyn, saxnaanta sifaynta sare iyo cadaadiska sare ee isticmaalka wareegga dheer ee beddelka; Waxay leedahay iska caabin heerkul aad u fiican iyo iska caabin daxalka, waxaa loo isticmaali karaa waqti dheer at 600 ℃, oo iska caabin kara daxalka ee nitric acid, alkali, dareere organic iyo daroogada; Mowjadda waa la jebin karaa si loo kordhiyo aagga shaandhaynta, alxanka ayaa ka dhigi kara dareeraha si xoog leh u xoqin oo gariir, oo fiber-ku ma dhici doono; Waa la nadiifin karaa waxaana la isticmaali karaa marar badan.
Fiber bir ah oo dareema ayaa ka adkaata cilladaha xannibaadda fudud iyo nuglaanta mesh birta. Waxay ka kooban tahay cilladaha alaabta filtarrada budada jilicsan iyo socodka yar yar, waxayna xallisaa qaab dhismeedka fiilada birta aan wanaagsanayn ee warqadda shaandhada iyo maro shaandhaynta oo aan heerkulka u adkaysan karin cadaadiskana u adkaysan kara. Waxa lagu goglay oo la isku xidhay shaybaadhka saddex-geesoodka ah, oo leh isgoysyo badan iyo awood xannibid sare leh. Qalabkani wuxuu leeyahay ugu yaraan laba lakab oo qaab-dhismeedka fiber-ka leh dhexroorka kala duwan si loo helo wax ka badan laba heer oo awood shaandhayn ah. Sababtoo ah wax qabadkeeda sifeynta aadka u fiican, waa shay shaandheyn ku habboon oo leh iska caabin heerkul sarreeya, iska caabin daxalka iyo saxnaanta sare.
Siligga birta ah ee la dareemay wuxuu yeelan karaa astaamo kala duwan marka loo eego qaab dhismeedkiisa. Waxaa ka mid ah, nooca cylindrical laalaabay wuxuu leeyahay aag shaandheyn ballaaran, awood xoog leh iyo rakibid habboon; Qaabka tuubada caatada ah ayaa ku habboon nadiifinta, caabbinta qulqulka ayaa yar. Goobabada xooga leh waxaa laga dhigi karaa unug filter ah, kaas oo badbaadiya kharashka, laakiin kuma haboona rarista, dejinta iyo nadiifinta.
Hore: Mesh gidaarka daahyada ah ee wax lagu qurxiyo ee tolnimada leh ee mesh
Xiga: Shaandheeyaha dhuumaha gaaska dabiiciga ah - filtarrada konical